Imincintiswano yezincwadi yamazwe omhlaba ngo-Ephreli | Izincwadi Zamanje
Njengayizolo ngikuphathele udaba nabathile imincintiswano yezemibhalo kazwelonke, namuhla ngikulethela ukungena okufanayo kodwa kulokhu nge imincintiswano yezincwadi yamazwe omhlaba ngo-Ephreli.
Uma ufuna ukubamba iqhaza kunoma iyiphi yazo, funda izisekelo, izinsuku, njll. Ngikushiya nolwazi.
1 I International Poetry Book Contest «UFernando Charry Lara» 2015 (Colombia)
2 Umncintiswano Wezinkondlo Wesibili ku-Decimas 2015 (Uruguay)
3 Umklomelo Weqoqo Lentsha YeGibraltar Editions (Mexico)
4 Amahlaya nomncintiswano wekhathuni - Ukulingana ngokobulili: Cabanga nje! (IBelgium)
I International Poetry Book Contest «UFernando Charry Lara» 2015 (Colombia)
Umklomelo: $ 9.000.000 noma okulingana nalo ngamadola nohlobo
Inhlangano ehlelayo: UMnyango Wezabantu kanye Nezincwadi
Izwe lebhizinisi elihlanganayo: I-Colombia
Usuku lokuvala: 09/04/15 (usenesikhathi!)
Ababhali banoma ibuphi ubuzwe bangabamba iqhaza nezincwadi ezibhalwe ngeSpanishi, ezingashicilelwe (kungenzeka ukuthi akukho zinkondlo ezinhlanu ezishicilelwe) indaba ephathwayo free, enemigqa ubuncane engama-800, ihlukaniswe kabili, eZwini, uhlobo olungu-arial 12.
Abangenele umncintiswano kumele bathumele incwadi nge-imeyili ngamafayela amabili: kweyodwa, encwadini, ngegama-mbumbulu, futhi kokunye, imininingwane yomuntu (incwadi yokukhomba, izinombolo zocingo, ikheli leposi kanye nele-elekthronikhi, idatha ye-bio-bibliographic). Ungathumela incwadi eyodwa kuphela ngombhali ngamunye.
Izincwadi kufanele zithunyelwe kukheli le-imeyili mbaqueror@ucentral.edu.co.
Isinqumo samajaji nomcimbi wokuklonyeliswa emcimbini womphakathi: Meyi 2, 2015
Ukwethulwa kwencwadi ewinile emcimbini womphakathi: Agasti 4, 2015
Umncintiswano Wezinkondlo Wesibili ku-Decimas 2015 (Uruguay)
Vula ku: abahlali base-Argentina nase-Uruguay
Inhlangano ehlelayo: IGrupo Decimero Rioplatense
Izwe lebhizinisi elihlanganayo: i-Uruguay
Isimo somncintiswano siyinkondlo eshumini, ngobude obuncane bamavesi angama-30 (Imigqa) nobude obungu-60. Imisebenzi ingathunyelwa ngeposi ku certamendecimeros@yahoo.com kumafayela amabili. Kwesinye idatha yombhali kanti kwesinye umsebenzi usayinwe ngegama-mbumbulu.
Zingathunyelwa futhi kwa-Avellaneda 495 CP 7100 DOLORES i-Argentina noma i-Artigas 154, CP27.000 Rocha, Uruguay. Kuzoba nemiklomelo emithathu (izindondo) kanye nokushiwo okuzobhekwa yijaji. Isikhathi esinqunyiwe sokuhambisa amaphepha sizophela ngomhlaka-10 Ephreli 2015 (umnqamulajuqu uphela kusasa).
Umklomelo Weqoqo Lentsha YeGibraltar Editions (Mexico)
Umklomelo: $ 10.000 kanye ne-edishini
Inhlangano ehlelayo: U-Ediciones Gibraltar
Izwe lebhizinisi elihlanganayo: Mexico
Imibhalo ingathunyelwa ngeSpanishi okuyizinguquko zemisebenzi yasendulo yomphakathi yezincwadi zomhlaba wonke, ezinwetshiwe zizoba phakathi kwamakhasi ayi-10 kuya kwayi-15, usayizi we-DIN A4 (210 x 297 mm), uthayiphe ngokucacile okuhlukaniswe kabili ku-Times New Roman, amaphuzu ayi-12 .
Bangathunyelwa nge-imeyili editionsgibraltar@gmx.com Inamathiselwe ngefomethi ye-Word (Extension .doc / .docx) emafayeleni amabili: "Work" kanye ne- "Escrow" lapho kuzovela khona igama lombhali, ikheli kanye nenombolo yocingo.
IJaji lizosibeka esidlangalaleni lesi sinqumo, singathandeki, emasontweni amabili edlule kaMeyi 2015.
Amahlaya nomncintiswano wekhathuni - Ukulingana ngokobulili: Cabanga nje! (IBelgium)
Umklomelo: Ama-euro ayi-1 000 nohambo oluya eBrussels
Kuvulekele: abantu abaphakathi kweminyaka eyi-18 nengama-28 ubudala, abangabahlali beLungu Lelungu le-EU
Ibhizinisi elihlanganayo: UN Women, kanye ne-European Commission, iBelgian Development Cooperation kanye ne-United Nations Regional Information Center ye-Western Europe (UNRIC)
Izwe lebhizinisi elihlanganayo: IBelgium
Usuku lokuvala: 20/04/15
Umklomelo wokuqala: 1 euro.
Umklomelo wesibili: ama-euro angama-500.
Imiklomelo emithathu yesithathu: ama-euro angama-200 lilinye.
Abazongena kowamanqamu abahlanu bazomenyelwa emcimbini wemiklomelo yomncintiswano eBrussels e ihlobo 2015. Izindleko zokuhamba nezokuhlala zizothwalwa yizinhlangano ezihlelayo. Ngaphezu kwalokho, imidwebo yabazongena kowamanqamu kanye nabazophela kowamanqamu izoshicilelwa encwajaneni futhi kungabhekwa ukubabonisa noma ukuyishicilela kabusha.
Le mincintiswano ilungile, akunjalo? Mina uqobo ngiyithanda kakhulu eyokugcina, ikakhulukazi ngenxa yetimu nesiqubulo. Uma bengingabamba iqhaza, benginganqikazi. Ubamba iqhaza!
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Imincintiswano Nemiklomelo » Imincintiswano yezincwadi zomhlaba wonke ngo-Ephreli
USolwazi José A. Hernandez Milan kusho
Isayithi lolwazi olunentshisekelo noludingekayo. Ngicela ukuthi ubheke ukuthi kungenzeka yini ukufaka izingcingo esihlokweni setango ne-lunfardo. (Izindaba, izindaba, izinkondlo nezingoma zezingoma)
Phendula uProfesa José A. Hernandez Milan
Izincwadi ezizofundwa emahoreni ambalwa